Shirkad Ingiriisa oo la sheegay inay gaaskale ka heshay Somali galbeed - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Shirkale oo la leeyahay dalkaasi Ingiriisa ayaa la sheegay inay gaaskale oo xad dhaafa ka heshay dghulka Somali galbeed gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Ceelqoran. Goobtan ayaa u dhow halkii shirkada Shiinaha ah ka heshay gaaska dabiiciga ah iyo saliida.
Waxa nasiib daro ah in reer galbeed gacanta loo geliyo kheyraadka dalkeena qaasatan kuwii ina qaybiyay. Shirkadan oo aan sidaa loo aqoon ayaa sanadahaaba diyaarado helicobtaro ah dul waday deegaanada u dhow halka Shiinuhu ka helay. Waxa heshiiska la siiyay xilli hore.
Waxa nasiib wanaaga in dhulkeena hodanka ah aan la soo bixi doono kheyraadkeena dhamaan dhulka Somaliyeedna noqon doono dhul lagu soo hirto waa haddii si fiican loo maamulo.
Ujeedooyinka aan loo rabin in Somaliya degtana waxa ka mida cida lahaan doonta kheyraadka oo ay ku tartamayaan reer galbeedku.
Sida ay qoreen jaraaidka Itoobiya ayaa la sheegay in shirkadan ay heshay gaas dabiici ah isla markaana wasiirka kheyraadka Itoobiya sheegay inuu hadda ku mashquulsan yahay sidii loo ganacsiyayn lahaa gaaskaasi.
Waxa laga soo xigtey in shirkad Maraykana ay rabto inay gaaskaas u bedesho mid dareere ah si deg xdeg loogu suuq geeyo, waxase la sheegay in uu u sheegay inay la xiriiraan shirkada Ingiriiska ee gaaska heshay oo aan la ogeyn inta wadaag ay ku leeyihiin.
Shirkadan Ingiriiska ayaa xirmooyin kale ku leh deegaano ay ka mid yihiin Cadhigaala. Shirkada Shiinaha ee iyadu gaaska heshay ayaa sheegtay in xadiga gaaska ee la helay uu hadda sii kordhey.
Itoobiya iyo Shiinaha ayaa hadda ku gudajira inay meel isla dhigaan dhuunta qaadi doonta gaaskaas oo Jabuuti geyn doonta qabka ay noqwon doonto iyo in loo bandhigo shirkado kale inay qodaan.
Gaaska ayaa lagu talojiraa in la dhoofiyo laba sano kadib haddii dhuumahaas go’aan laga gaaro, Shiinuhuna dhiso warshada sifeysa gaaska.